राष्ट्रका जिम्मेवार नागरिक कहाँ छन् ?
नेपालको दश बर्षे पीडादायी जनयुद्ध १२ बुद्धे सम्झौता मार्फत जनताको भावना अनुरुप शान्तिपूर्ण बाताबरण बन्ला राष्ट्रले सकारात्मक फड्को मार्ला नागरिकले मानबिय मुल्य र मान्यताको कानुनी राज्य पाउलान भने जुन अपेक्षा थियो त्यो आशा र विश्वास अब जनताले मारिसकेका छन् ।
नेपाल को राजनीति कता जान्छ ? जनता ब्याकुल छन पछिल्लो राजनैतिक अवस्था झन अस्थिर र खतरनाक बन्दै गएको छ । जनतालाइ शान्ति र संबिधान निर्माणको प्रक्रियाप्रति आस्वस्त पार्नुको साटो राजनैतिक दलहरु एक अर्कालाइ दोष थुपारेर आफु चोखो हुने गैर जिम्मेवार कार्यमा अभ्यस्त भएका छन् जातीय युद्धमा देश होम्मिन्छ ? वा फेरी २०४७ सालको संबिधान फर्किन्छ ? तर कसरि र कसले सम्हाल्ने त्यस पछीको विषम परिस्थिति ? यस्ता अनुत्तरित र अनिश्चितताको राजनैतिक चपेटामा जनता निचोरिएका छन् ।
देश यतिबेला अनिर्णयको बन्दी जस्तो बनेको छ। पार्टीहरु गन्तव्यहीन यात्रामा अल्मलिएका छन्। उनीहरुको एकै सोच र विचार देखिंदैन। अब के हुन्छ त? हरेकका आ–आफ्ना उत्तर छन्। पार्टीको धारणा एउटै बन्न सकेको छैन। हरेक पार्टी दुई वा तीनमा विभाजित छन्। पार्टीभित्र भन्दा बाहिर साथी बढ्दैछन्। एमाओवादी भित्रका एकथरी आफ्ना साथीभन्दा बाहिरका कांग्रेस र एमालेसँग हातेमालो बढिरहेको छ। यही कुरा कांग्रेसभित्र र एमालेभित्र पनि देखिन्छ। पार्टी, पार्टी जस्ता नभएर पञ्चायतकालका मञ्च वा मोर्चा जस्तो बनेको छ। आफ्नो पार्टीभित्र नै समस्या हल गर्ने भन्दा बाहिरबाट छलफल र बहस गरेर समाधान खोजिनु संक्रमणकालको यो ढंगको राजनीतिक शैलीले निकट भविष्यमा ठूलो दुर्घटना हुने खतरा देखिदैछ।
किनभने भारत हाम्रो घर आँगनमा आएर खेल्दैछ । इतिहासमा कहिल्यै नभएको बाह्य हस्तक्षेप अहिले भएको महसुस मान्छेहरुले गरेका छन् नेपालमा। लगभग चार दशकपूर्वको हाम्रै छिमेकी देश सिक्किम अहिले अस्तित्वमा छैन। त्यो सुन्दर सानो स्वतन्त्र मुलुकमा भारतीय सेना पसाएर भारतमा विलीन भएको होइन ? सिक्किम भारतले निल्नुपूर्वका दुई, तीन वर्षअघि राजनीतिक चित्रबाट अहिले हामी गुजि्ररहेका छौं। हरेक ठाउँ र क्षेत्रमा सिंहदरवार निर्णायक हुनुपर्नेमा दिल्ली दरवार निर्णायक हुँदैछ। राजनीतिक क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रका जरोहरु समात्दै जाँदा त्यसको मूल जरोको थलो दिल्लीमै भेटिन्छ। यसले के संकेत गर्छ? यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य नेपालका लागि के हुनसक्छ? यसबारेमा अहिले धेरै बहस नगरौं । मान्छेहरुले फेरि पनि लगातार सोधिरहने प्रश्न बनेको छ अब के हुन्छ? कुनै पार्टी वा प्रमुख जिम्मेवार नेताबाट एउटै उत्तर आउन सक्दैन र पाउन पनि सकिदैन। हामी सचेत पत्रकार वा नागरिक समाजका अगुवा पनि एकमत छैनौं। कमसेकम शान्ति, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका विषयमा साझा सहमति बन्न सक्दैन र? यदि बन्न सक्दैन भने हाम्रा तत्कालका केही तुच्छ स्वार्थ त पूरा होलान्, हामी नेपाल र नेपाली भएर बाँचिरहने संभावना चाहिं कम छ। यो दोष अरु कसैलाई दिनुभन्दा पनि हाम्रो स्वाभिमान सुदृढ गरौं, अर्काको स्वाभिमानलाई चाहिं सम्मान गरौं। आफ्नो घरबाटै हाम्रो शक्तिलाई सुदृढ गर्न सक्यौं भने पराइले हेप्न सक्दैन। यो अहिलेको पार्टी, पार्टीभित्रका लडाइँ–संघर्षले पार्टी र नेताहरुलाई मात्र कमजोर बनाएको छैन। देशलाई खोक्रो र राष्ट्रलाई कमजोर बनाएको छ। कमसेकम लोकतन्त्रलाई र जनतालाई विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरुले क्षणिक र तुच्छ स्वार्थमा अल्भि्कएर दीर्घकालसम्म देश र जनतालाई नकारात्मक असर पर्नेगरी संघर्ष नगरौं। राष्ट्र र जनताका पक्षका साझा एजेन्डा के छन्, त्यसैमा साझा सहमतिहरु के छन् त्यसबाट निकास खोजौं। सरकारविहीन अवस्थाबाट देश जुन गतिमा गुजि्ररहेको छ। त्यसबाट मुक्त गरौं। जनताको मतदानलाई सवैभन्दा निर्णायक मानौं। एजेण्डाहरु फरक भएकाले फरक पार्टी भएका हुन्। संक्रमणकालको यो संवेदनशील घडीमा एकले अर्कोप्रति शर्तहरु राखेर विवादलाई लम्ब्याउनको सट्टा एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच अहिले चलिरहेको सरकार चलाउने चक्रीय प्रणालीको बहसलाई सार्थक निस्कर्षमा पुर्याऔं। एक दलले अर्को दलप्रति राखेका र सारिएका शर्तहरुको बारेमा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने उक्तिलाई सार्थक नपारौं। यी शर्तहरु देशको हितका खातिर हाललाई थाँती राखौं। यसो गर्न सकियो भने, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, देश, जनता हामी सवै बलियो हुन्छौं । यो कुरालाई सवैले मनन गर्न ढिलो नगरौं ।
राजनीतक दल र नेतृत्वको बिचमा विवाद भैराखेको अनि देश भने नेतृत्व बिहिन हुन पुगेको अबस्थामा छ । (स्मरण रहोस कुनै पनि दलका कार्यकर्ता नेतृत्व बर्गको पकडमा छैनन्) देश कहाँ पुग्छ कुन तत्वले कसरि परिचालन गर्छ थाहा नै हुदैन । तसर्थ यस्तो विषमा परिस्थितिबाट देशलाइ सहज र शान्तिपूर्बक निकास दिन देश भित्र कै अनुभबी कानुनबिद, प्रशासक र प्रबुद्ध नागरिकको मुख्य भूमिका र दायित्व हुनु पर्छ भन्दा अन्यथा नहोला । नेपालको लागि कस्तो राजनैतिक व्यवस्था, कस्तो शासकीय स्वरुप र कस्तो संघियता लागु गर्नु पर्छ भनेर सल्लाह सुझाब र दबाब दिनको लागी राजनैतिकबाद र सिदान्तबाट माथि उठेको र देश र जनताको लागि समर्पित एउटा कुनै भरपर्दो र बिस्वासिलो निष्पक्ष समुह नदेखिनु बिडम्बना नै मान्नु पर्छ ।
देशमा जातीय र क्षेत्रीय स्वाधिकार सहितको प्रान्त(राज्य ) को नारा चर्किएको छ .धार्मिकता, जातियता र क्षेत्रीयता को धुवादार विवाद उठेको छ । सबै दल र नेतृत्व प्रति जनताको विश्वास खस्किएको छ ,राष्ट्रको यस्तो विषम परिस्थितिमा हिजो बिभिन्न पदमा बसेर अनुभब सम्हालेका र सो बापत भत्ता बुझिरहेका समुहले सामुहिक रुपमा देशको हितार्थ राजनैतिक दल र नेतृत्वलाइ सहि बाटोमा डोर्याउन गहन भूमिका खेल्नु पर्छ । यस्तो समयमा छात्रवृत्ति पाएर विदेश अध्ययनमा आएर स्वदेश न फर्किएका तमाम प्रबुद्ध बर्गले पनि अफ्नो दायित्व हमसुस गरि आफ्नो दृष्टिकोण सम्प्रेषण गर्नु पर्छ । पत्रकार रबिन्द्र मिश्र हुन् कि बिज्ञ महाबिर पुन वहाहरुलाइ पछ्याउनु पर्छ । तमासा मात्र हेरेर बस्ने र कुनै योगदान नपुर्याउने ? कोठे गफ र चिन्ता ले के गर्छ ? जब सम्म सतहमा कार्यान्वयन गर्दैनौ भने ?
बिदेशी नियोग, आइ एन जी ओ वा सरकारको सल्लाहमा नेपालको राजनैतिक स्थायित्व, स्वाधिनता र शान्तिको जग बलियो बन्दैन । नेपाल र नेपाली बलियो बन्दैनन । नेपालीको एकता बिना कुनै पनि नीति सिदान्त वा व्यवस्था टिकाउ हुदैन । तसर्थ इतिहासले आज देशमा त्यस्तो रास्ट्र प्रेमी स्वाभिमानी इमान्दार र राष्ट्र हितमा समर्पित एउटा निष्पक्ष नेतृत्वको खोजि गरि राखेको छ । २०६९ जेष्ठ१४ पछी नेपालको भबिस्यप्रति अनेक शंका आशंका त्रासको कालो बादल छाएको छ । त्यस्तो कालो बादल हटाउन जिम्मेवार नागरिकहरुको समुह अगाडी आइ दल र नेतृत्वहरुलाइ एकसुत्रमा (एउटै टेबुल) राख्दै उन्नत नेपालको भबिस्य प्रति आशा जगाउन ठोस र सर्ब सम्मत हुने मार्ग खोज्नु परेको छ । राष्ट्रका जिम्मेवार नागरिक कहाँ छन् ?